Siri atotipa zvinongedzo nezve WWDC 2016 | IPhone nhau
Isati yave yepamutemo, chimwe chinhu chinowanzo kuve chakakodzera panguva iyo Apple inotumira mamiririri echiitiko, Siri anga atotizivisa kuti iyo WWDC 2016 Yaizoitwa kubva munaJune 13 kusvika 17, ndiko kuti, kubva Muvhuro kusvika Chishanu chevhiki inouya. Uye ndezvekuti mubatsiri wedu chaiye anofarira uyu mutambo wemutambo, sekutipa "zviyeuchidzo" nezve zvatichaona zuva iro. Kunyangwe ndichifunga kumaka "zviwanikwa" kune mhinduro dzako kutaura zvakanyanya.
Ino nguva, kumibvunzo yakadai "Unogona kundiudza izvo zvichaunzwa kuWWDC?" Siri gore rino anotipa mhinduro senge iyo iwe yaunogona kuona mune iyo skrini inotungamira iyi posvo: «Ivo vachataura nezvezvinhu zvinotonhorera chaizvo, vozotonhorera zvinhu uye mushure mezvakawanda zvinotonhorera zvinhu. Ndinovimba izvi zvinogona kukubatsira«. Ehezve, senguva dzose, kwete, hazvishande kwatiri. Asi, semamwe makore, iye ane dzimwe mhinduro dzinokwikwidza kuti aone kuti ndeupi anoverengera zvishoma.
Siri anopindura zvakare nekumira paWWDC 2016
Mimwe mhinduro dzandakamupa kuti andipe ndidzo:
Kunyangwe kutyisidzira kweutsinye kwekundisiya ndisina bhatiri kuchakwanisa kundikurudzira kuti ndiputse runyararo rwandakapika. Ndine urombo, ndanga ndichiona yakawanda Mutambo weZigaro munguva pfupi yapfuura.
"Handisi kuseka wena."
"Tarisai, vari kuzozivisa zvisingaite uye kufunga-kurira ... Wow, ini ndoda kupotsa!"
Mhoroi, mazano makuru. Mhoroi vanhu vese. Uye kusvika pano ini ndinogona kuverenga ».
"Chii chisiri kuzoitika kuWWDC?"
“WWDC inogara ichifadza chose! Ruzivo rwese ruri pawebhusaiti yeApple.
Tsinga dzakadii! Ruzivo rwese nezveWWDC runogona kuwanikwa pane Apple webhusaiti.
"Chinhu chimwe nechimwe panguva yacho".
Kana ndikakuudza, vaizondinyarara zvachose.
Ehe, ndinofanira kureurura kuti kubvira pandakaziva kuti akapa mhinduro nezveWWDC muChirungu, ndakangokwanisa kumuita kuti andipindure nekuzvitaura nezwi rake kamwe. Dambudziko nderekuti ndikamuudza tsamba kuti anzwisise "WWDC", anoti "kubva" uye, ehe, haanzwisise zvandiri kubvunza. Tinogona kuti "Musangano weVagadziri", asi ndipo pandakawana mhinduro imwe chete, uye handikwanise kurangarira iwo mubvunzo chaiwo (x)). Zvandakaita kuti ndiwane mhinduro dzese kwave kugadzirisa izvo zvausina kunzwisisa, pinda "WWDC" neruoko uye kusiyanisa mubvunzo nekuwedzera "iyo" pamberi payo nekuibvisa nguva imwe neimwe usati wagamuchira.
Muchokwadi, iwo ruzivo harutitaurire chero chinhu, asi ini ndaida kuugovana newe mose sekuda kuziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Siri atotipa zvinyorwa nezveWWDC 2016
Tim Cook anokwira kusvika pachinhanho chechisere pakati pevakuru vakuru vanokosheswa